Semalt: Ukuqeda ama-Ghost Referrals Google Analytics
Ukudluliselwa koMoya kungokoqobo, futhi kungenzeka ukuthi omunye wabhekana nabo ngaphandle kokuqaphela. Kungase kubonakale njengomgwaqo omuhle futhi onenzuzo, kodwa iqiniso liwukuthi akukho traffic khona. Okubi nakakhulu ukuthi umgwaqo uphambisa imibiko ye-Google Analytics. Akukho uhlu lwekhonkrithi lwazo zonke izizinda ze-spammy njengoba ziqhubeka nokuguquka. Njengoba beqhubeka bekhula, bashintsha amaqhinga, isakhiwo, nobuchwepheshe babo asetshenziswayo. Yingakho kungabikho isixazululo esinokwethenjelwa sengozi.
Umhlahlandlela olandelayo ohlinzekwa nguMichael Brown, iMenenja Yokuphumelela Kwamakhasimende Semalt, kufanele aqede iningi lalezi zingongelo.
Ukususa okudluliselwe okugaxekile ku-Google Analytics
Kunezindlela ezahlukene lapho umsebenzisi angafeza khona umsebenzi:
Ukusebenzisa i-Google Tag Manager
Izihlungi ze-Google Analytics
# 1 Emuva Konke Okuphezulu
Idatha equkethwe ohlelweni ibalulekile. Uma umuntu ezobhekana nanoma yini engakwazi ukushintsha isakhiwo sayo njenge-malware, iTrojans, noma ama-virus. Ngakho-ke kubalulekile ukuyibuyisela kuqala ngaphambi kwanoma yini enye. Kunezindlela eziningi zokuvuselela i-Analytics ukuqinisekisa ukuthi umnikazi ugcina yonke idatha eluhlaza.
# 2 Ukusebenzisa i-Wrong Hostname Filter
Vula i-Google Analytics, bese uya ku-Abalaleli, bese ukhetha Inethiwekhi. Lapho uvula, khetha Igama lokubamba ukuze ubonise wonke ama-hostnames atholakale kubasebenzisi abafisa ukuvakashela isayithi. Akunakwenzeka ukuqhuba iskripthi se-Analytics kwesinye isizinda ngaphandle kweyakho. Uma i-referress ghost ibonakala, chofoza ku-Admin, ikholomu elungile kufanele linikeze ukhetho lokukhetha uhlobo olufanele lombukiso olufisa ukusebenzisa..Okulandelayo, khetha izihlungi bese ukhetha isihlungi esisha. Khetha uhlobo lokuhlunga lwesici bese ukhetha kufaka phakathi. Okulandelayo, faka i-regex efana negama lomnikazi elihlonziwe noma ngaphandle kwe-www.
# 3 Ukuhlunga i-Traffic Referral Traffic
Into yokuqala okufanele uyenze ukuhlunga ithrafikhi eyenzeka kude nesizinda sewebhu. Kodwa-ke, uma i-spambot yenza indlela eya kusayithi, qala kuqala udale isihlungi esisha ngokuya ezihlungi, yakha isihlungi esisha. Khetha "ukudluliselwa" enkundleni yokuhlunga, futhi "u-regex omude" kuphethini lokuhlunga. Okwesibili, i-Analytics inikeza isici lapho abasebenzisi bangakwazi ukuhlunga khona izicabucabu nama-bots. Khetha "Admin", chofoza ku- "buka", nangaphansi kokuthi "izilungiselelo zokubukwa", hlola inketho ebizwa ngokuthi "Ukuhlunga kwe-Botnet".
# 4 Ukubeka ikhukhi ukuhlunga okudlulisiwe kogaxekile
Izixazululo eziphakanyisiwe kuze kube manje azihlali isikhathi eside ngenxa yenani elikhulayo lama-spam botsuku zonke. Nansi isimiso esisodwa okufanele sisebenze kwisayithi:
I-spam bots ayinawo iziphequluli.
Beka ikhukhi kusiphequluli sesithameli.
Funda ikhukhi kwi-Google Tag Manager bese uyifaka ku-analytics.
I-Google Analytics izocabangela kuphela izivakashi nge-cookie.
Umnikazi wesayithi angasetha amakhukhi kusiphequluli sesisakhamuzi esebenzisa izindlela ezimbili. Owokuqala umaka womlilo kumphathi we-Tag noma ukwengeza ngesandla nge-cookie usebenzisa i-code snippet "emva kwe- ithegi" ngaphansi kwesiphequluli. I-Google Analytics ingatholi ikhukhi ye-Tag Manager 'yingakho le yamuva ingcono kakhulu.
Kwithebhu "Admin", khetha "izincazelo zenkambiso nobukhulu." Dala isimo se-cookie dev. Manje, funda ukubaluleka kwekhukhi ngokuya eziguquguqukweni, bese uchofoza okusha. Uma usuqedile ngalokhu, hlola ku-GTM, futhi ngaphansi kwezilinganiso zokuhlela ngokweziko, faka inkomba entsha nesimo se-dev esichashazayo esivele sidalwe. Isinyathelo sokugcina ukuqinisekisa ukuthi i-Google Analytics ibona kuphela ithrafikhi nge-cookie. Dala isihlungi esisha nemingcele ehlanganisa izincazelo ze-cookie.